05/05/2018 - Page 3 sur 3 -
Ao anatin’ny telo volana fahatelo farany mialohan’ny hiatrehana ireo karazana fanadinana ny mpianatra ankehitriny. CEPE, BEPC ary BACC ho an’ny ambaratonga voalohany sy faharoa. Miaina ao anaty tebiteby sy horohoro tanteraka anefa ny mpianatra sy …Tohiny
« Tsy misy « frein »
Mendrika ny horesahina koa ny fanelezana vaovao tsy marina ankatok’izao hetsiky ny Mapar sy Tim etsy Analakely izao. Tahaka ireny efa tsy azo honenana ireny intsony ao Antananarivo Renivohitra ao raha avy hatrany dia mihinana …Tohiny
Eo am-piandrasana ny vokatra ofisilay avoakan’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana dia mivoaka tsikelikely ny vokatra avy etsy amin’ny CENI Alarobia. Lasa aloha eo amin’ny fanangonam-bokatra ihany koa anefa ny komity mpanohana an’i Marc Ravalomanana ...Tohiny